Tompon’andraikitra: fanendrena tsy mitanila | NewsMada
Tompon’andraikitra: fanendrena tsy mitanila
Tsy ho ela ny fanendren’ny filoha Rajoelina Andry ny mpiara-miasa aminy, indrindra ny ho praiminisitra sy ny mpikambana ao anatin’ny governemanta. Maro ny feo mandeha etsy sy eroa, ny anarana mandehandeha, saingy izy irery ihany no hanamarina izany rehetra izany na tsia. Anisan’ny singa iray azo ijerana ny mety handehanan’ny safidiny ny voka-pifidianana azony isam-paritra sy ny tompon’andraikitra efa mitantana, toy ny praiminisitra, ankehitriny avy any avaratry ny Nosy, ohatra.
Nahazo vato betsaka rahateo ny filoha vaovao tany avaratry ny Nosy (70%), tamin’ny fihodinana faharoa teo, ary tsy latsak’izany ny tany atsimo, satria nifidy azy ny manodidina ny 2/3-n’ny vato tamin’ny ankapobeny. Azo antoka fa mety hanendry ho tompon’andraikitra na minisitra avy any amin’iny faritra tapany atsimo (Ihorombe, Anosy, Atsimo Andrefana, Androy), sy ny any atsimo atsinanana (Vatovavy fitovinany, Atsimo Atsinanana), noho izany ny filoha Rajoelina Andry.
Etsy ankilany, irarian’ny maro ny tsy hisian’ny fanendrena tsy mitanila, satria nohamafisiny rahateo fa « filohan’ny Malagasy tsy ankanavaka » ny tenany, midika fa hitondra fampandrosoana isam-paritra ihany koa fa tsy hitanila toy ny fanendrena tompon’andraikitra rahateo.